Tora Outlook Express Dhata kubva kuTemporary Mafaira
musha Products DataNumen Outlook Express Repair Tora Outlook Express Dhata kubva kuTemporary Mafaira
apo Outlook Express inobatanidza .dbx faira, ichagadzira temporary .dbt faira pasi peiyo yakafanana folda seiyo .dbx faira. Semuenzaniso, kana iwe uri compact Inbox.dbx faira, ipapo iyo temporary faira ichave Inbox.dbt.
Kana kukanganisa kukaitika panguva yekushanda kwecompact uye usingakwanise kuwana yako mail folda zvakare, uye haugone kudzosa data rawaida kubva ku .dbx faira, ipapo zvichiri kugona kudzoreredza data rako kubva kutemporary .dbt faira, seinotevera:
Tsvaga iyo folda panochengeterwa iyo .dbx faira.
Tarisa uone kana paine temporary .dbt faira pasi pefaira rimwe chete.
Kana hongu, wozoitumidza imwe faira pamwe .dbx faira rekuwedzera, semuenzaniso, kana iyo .dbt faira inonzi Inbox.dbt, saka unogona kuitazve iyo InboxTemp.dbx.
shandisa DataNumen Outlook Express Repair kuverenga iyo InboxTemp.dbx faira uye kudzosa maemail kubva pairi.